Hagaha oo dhan m2ts / codec mts
Waxaa jira baakad codec badan oo laga heli karaa internetka oo aad u hubiso in qaabab kala duwan ayaa waxaa lagu ciyaari kasta oo ciyaaryahan aan ka kaaftoomi ee degsado ka fur-tago si gooni gooni ah u kasta oo kale. Waxaa sidoo kale in la xuso in codec waa hab fiican si loo hubiyo in ciyaaro oo dhan qaabab ee ma aha arin oo dhan. Waxaa sidoo kale in la xuso in baakada codec ugu fiican waa mid ka mid ah taas oo iftiin miisaanka oo ku rakibtay ilbiriqsi gudahood. Miisaanka Light iyo baakado codec wax ku ool ah leeyihiin faa'iidooyin kala duwan kaas oo sidoo kale ka mid ah waxtarka sii kordheysa ee ka kooban yihiin in la xiriira. Waxa kale oo la arkay in ciyaartoyda in lagu rakibay ayaa sidoo kale noqday degdeg ah oo hufan haddii baakada codec sax ah oo waafaqsan shuruudaha ciyaaryahan la soo bixi. Si aad u hesho natiijooyinka ugu fiican, waxaa lagula talinayaa in ay si taxadar leh u dooran baakad codec sida jiraan tobanaan kun oo ka mid ah online oo aan kala sooc lahayn gaaray ama doorashada hubiyo in wanaag la sameeyo marnaba nidaamka wax kasta oo iyaga ka dhigi doonaa iyo waxa kale oo dhici kara xun baakad codec shil ciyaartoyda ama nidaamyada.
Qaybta 1: Waa maxay m2ts / mts codec?
Qeybta 2: Top 5 m2ts / mts pack codec daaqado iyo Mac
Gaar ahaan hadlayay m2ts codec baakad waa kuwa la go'an tahay in la hubiyo in ay m2ts iyo qaabab mts waxaa lagu ciyaaray habka ugu fiican. Kuwani baakad codec marnaba dedicatedly yimaadaan oo sabab la mid ah waa in la ogaadaa in rakibidda this baakad codec ka dhigan tahay in ay qaabab kale ayaa sidoo kale waxaa la ciyaari doonaa arrintan la xiriira. Si kastaba ha ahaatee waa mid aad u fudud in la hubiyo in qaababkan soo sheegnay waxaa si fudud oo aan wax arrintan oo dhibaato ciyaaray. Mar kale hal dhibic ka mid ah waa in la soo xusuusto, oo ay tahay in user waa in la hubiyo in pack ugu fiican ee la soo bixi sida dhigi m2ts iyo qaabab mts waa kuwa in ay yihiin dhif iyo baakado la heli karo waa kuwo aan caan ah. Si aad u hesho natiijooyinka ugu fiican waa taas daraaddeed waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in dib u eegista user iyo ratings guud ahaan waxaa loo sugayay ka hor dajinta lagu sameeyo arrintan la xiriira. Baakad codec la xidhiidha qaababka waxaa sidoo kale lagu weyn ee size laakiin ee Duke of horumarinta ee sayniska iyo farsamada waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in ay baakad kuwa soo bixi in yar oo cabbirka sida baakadaha waxaa sidoo kale la sameeyey arrintan la xiriira .
Ka dib waxaa lagu 5 m2ts / mts sare baakad codec ee daaqadaha iyo Mac in user a soo bixi kartaa si loo hubiyo in ugu fiican in la siiyo nidaamka kaas oo faylasha ku xusan waa in la ciyaaray. Waxaa sidoo kale in la xuso in baakad 3 codec hore in halkan lagu tirsan yihiin Windows iyo laba la soo dhaafay ka tirsan Mac OS. Caddaynta Tani waa lagama maarmaan u sabab ah in user a waa in aysan qaadan qasan iyo sidoo kale waa in la hubiyo in baakada codec xaq u bixi u OS saxda ah oo aan wax ka kaaftoomi iyo dhibaato,
CCCP: codec bulshada isku hayaa http://www.cccp-project.net/
K-Lite codec hayaa http://codecpackguide.com/klcodec.htm
Codec VLC ku xirato http://download.cnet.com/VLC-Codec-Pack/3000-13632_4-75862970.html
MTS codec ku xirato http://www.5kplayer.com/video-music-player/free-mts-file-player.htm
Hoos waxaa ku qoran sharaxaad ka mid ah kuwan oo dhan sameeyo hab ugu fiican si loo hubiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan ayadoo laga soo degsado baakada codec sida ay shuruudaha iyo dalabaadka. In description this ciyaartoyda kuwaas oo taageeri baakad codec ayaa sidoo kale looga hadli doonaa si faahfaahsan si ciyaaryahanka saxda ah ayaa sidoo kale waxaa lagala soo bixi kartaa adigoo user ee arrintan la xiriira:
Waa show toos ah iyo baakada codec video for daaqadaha. Waxaa sidoo kale in la xuso in xirmadan codec waa wax la soo saaro si loo hubiyo in marka laga reebo m2ts iyo mts qaabab kordhin kale file ayaa sidoo kale ciyaaray isagoo aan wax arrintan iyo dhibaato. Waxaa sidoo kale la socotid state of farshaxanka iyo filter xoog taas oo ka dhigaysa hubiyo in qaab kale sida Xvid, DivX iyo H.264 waxaa lagu ciyaaray oo aan wax ka kaaftoomi iyo dhibaato. Tani waa fudud miisaanka codec taas oo ka dhigaysa hubiyo in dhamaan ciyaartoyda waxaa lagu taageeray si loo eegin brand oo waxaad ka samaysaa dhamaan ciyaartoyda uu furmo suuqa waxaa taageera codec this arrintan la xiriira. Horumarinta waa tryouts FFshow.
2. CCCP: daro baakad codec bulshada
Pack codec CCCP waa mid ka mid ah kuwa baakad codec in la horumariyo si loo hubiyo in pack hal jiro si ay u taageeraan oo dhan qaabab ka duwan badan in lagu horumariyo arrintan la xiriira. Sidoo kale waa mid ka mid ah kuwa baakad oo loo hubiyo in ugu fiican ayaa la siiyaa si user ah in arrintan la xiriira iyo faa'iidooyinka soo socda ayaa sidoo kale ku riyaaqay:
End of khilaafsan dhexeeya baakad kala duwan
Wixii Isladooda bulshada pack codec hal ayaa la soo saaray
Marka laga reebo m2ts iyo mts kordhin dhan qaabab waaweyn ayaa laga taageeray
Ciyaartoyda kuwaas oo ay taageerayaan this baakad codec waa KL ciyaaryahan, optimizer Ultimate PC, ciyaaryahanka DA iyo liiska ku dhaco. Pack ayaa la soo saaray oo ay bulshada isku daro.
Pack codec 3. K-lite
Waa mid ka mid ah baakad codec ugu badan in la soo saaro iyo dadka isticmaala kuwaas oo tiro badan oo dunida oo dhan tahay. Eegin qaabab file iyo kordhinta guud ahaan in clips kala duwan waxay u baahan tahay pack K-lite codec inay hubiyaan in ugu fiican in la siiyo dadka isticmaala ee arrintan la xiriira sameeyo. Sidoo kale waa pack ah ay ku jiraan oo dhan qalab ku saabsan codec taasoo user a dalban karaa si loo hubiyo in ugu fiican waxaa lagu bixiyaa arrintan la xiriira. Ciyaartoyda taasoo ay taageereyso pack tani waa VLC Media Player, ciyaaryahanka WM, Zoom Player iyo liiska mar kale ku dhaco. Pack ayaa codec K-lite waxaa ee ay soo biiraayo K-lite.
Mac taageeray ciyaartoyda
Ka dib waa baakad ku codec taageera OS Mac iyo natiijada ugu fiican ee arrintan la xiriira ay u hesho:
4. pack codec VLC
Marka laga reebo daaqadaha OS Mac sidoo kale taageertaa baakada codec VLC arrintan la xiriira. Tiro balaadhan oo ah ciyaartoy waxaa taageera pack codec this arrintan la xiriira. Si aad u hubiso in natiijada ugu wanaagsan waxaa lagu helaa waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in xirmadan codec la soo bixi oo lagu rakibay inuu u ciyaaro ee m2ts iyo ciyaartoyda mts arrintan la xiriira. Haddii ciyaaryahan default ee OS Mac ah la siinaya farriimo baadi mar kale iyo mar kale ka dibna waa mid ka mid ah baakad codec ugu fiican in ay tahay in lagu xiro. Ciyaartoyda in lagu taageeraa waa VLC Media Player , ciyaaryahanka DivX iyo ciyaaryahan fiican. Horumarinta waa Video LAN.
Weli pack kale codec light waa doorashada ugu fiican ee Mac ah. Waxaa sidoo kale in la xuso in baakada codec MTS ayaa la soo saaray arrintan la xiriira oo ay ku dhiirigelinayaan ee 5K urur ciyaaryahanka. Waxaa sidoo kale in la xusay in waxa ugu fiican in la siiyo user ee arrintan la xiriira sida baakada codec taageeraa oo dhan qaabab waaweyn iyo inuu u ciyaaro ka dibna user Khasab ma aha in download baakad kala duwan codec si gooni gooni ah. Liiska ciyaartoyda waa ciyaaryahan markii deg deg ah, ciyaaryahanka Elmedia iyo ciyaaryahanka 5K ah.
Sida loo Beddelaan ID3 Tag
> Resource > Beddelaan > Hagaha oo dhan m2ts / codec mts